အမျိုးသားများ အိပ်ယာထက်မှာ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေ | Buzzy
အမျိုးသားများ အိပ်ယာထက်မှာ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေ
ချစ်တင်းနှောချိန်မှာ သင်ဟာ သင့်အဖော်ကို ဂရုတစိုက်ရှိနေ သင့်ပါတယ် ၊ သင်တစ်ယောက်တည်း လွင့်မျောနေတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး ။ အတူတူရှိနေကြောင်း သင့်အဖော်သိအောင် ဂရုတစိုက်ရှိပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူမနဲ့ မျက်လုံးချင်းစုံအောင် ကြည့်ပြီး ချစ်မြတ်နိုးမှု ကြင်နာမှု ဂရုစိုက်မှုတို့ကို ဖော်ပြပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
ခဈြတငျးနှောခြိနျမှာ သငျဟာ သငျ့အဖျောကို ဂရုတစိုကျရှိနေ သငျ့ပါတယျ ၊ သငျတဈယောကျတညျး လှငျ့မြောနတောမြိုး မလုပျသငျ့ပါဘူး ။ အတူတူရှိနကွေောငျး သငျ့အဖျောသိအောငျ ဂရုတစိုကျရှိပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ သူမနဲ့ မကျြလုံးခငျြးစုံအောငျ ကွညျ့ပွီး ခဈြမွတျနိုးမှု ကွငျနာမှု ဂရုစိုကျမှုတို့ကို ဖျောပွပေးနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
သင့်အနေနဲ့ ပုံမှန် ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ သင့်ရဲ. အိပ်ယာတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေမှာ အမှန်ပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားမှုကို ထူးခြားကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်ပေါ့ ။
သငျ့အနနေဲ့ ပုံမှနျ ကနျြးမာရေး လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ ပွုလုပျပေးခွငျးဟာ သငျ့ရဲ. အိပျယာတှငျး စှမျးဆောငျရညျကို တိုးတကျစမှော အမှနျပါပဲ။ လကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျခွငျးဟာ သငျ့ကို လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ခံစားမှုကို ထူးခွားကောငျးမှနျအောငျ လုပျဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။ အနညျးဆုံး တဈပတျကို တဈကွိမျလောကျပေါ့ ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်ခြင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြွက်သားအနေနဲ့ သီးသန့်မရှိပေမယ့် ၊ လိင်မှုကိစ္စကို အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့ ကြွက်သားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ. လက်မောင်း ၊ ခါး ၊ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ဆီးခုံကြွက်သားတို့ဟာ ချစ်တင်းနှောရာမှာ အဓိက အလုပ်လုပ်ရတဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်တာမို့ Kegel လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ. လိင်အဂါင်္ကြွက်သားတွေအတွက် ဆီးသွားရင်း ညှစ်ပေးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ကွှကျသားအနနေဲ့ သီးသနျ့မရှိပမေယျ့ ၊ လိငျမှုကိစ်စကို အထောကျအကူပေးနိုငျတဲ့ ကွှကျသားတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးဖို့ အထူးလိုအပျပါတယျ။ သငျ့ရဲ. လကျမောငျး ၊ ခါး ၊ ဝမျးဗိုကျနဲ့ ဆီးခုံကွှကျသားတို့ဟာ ခဈြတငျးနှောရာမှာ အဓိက အလုပျလုပျရတဲ့ နရောတှေ ဖွဈတာမို့ Kegel လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျသငျ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သငျ့ရဲ. လိငျအဂါင်ျကွှကျသားတှအေတှကျ ဆီးသှားရငျး ညှဈပေးတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးလညျး လုပျပေးနိုငျပါတယျ။
အိပ်ရေးအပျက်မခံပါနဲ့ ၊ စိတ်သောကများနေရင်လည်း ချစ်တင်းနှောလိုစိတ်ကို လျှော့ကျစေပါတယ်။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရှစ်နာရီ အိပ်စက်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းစင်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်ပါ။
အိပျရေးအပကျြမခံပါနဲ့ ၊ စိတျသောကမြားနရေငျလညျး ခဈြတငျးနှောလိုစိတျကို လြှော့ကစြပေါတယျ။ တဈနကေို့ အနညျးဆုံး ရှဈနာရီ အိပျစကျပွီး စိတျဖိစီးမှု ကငျးစငျအောငျ ကွိုးစားနထေိုငျပါ။
သင့်အနေနဲ့ သင်ပြုမူချင်သလို ပြုမူနေတာမျိုး မလုပ်ပဲ ၊ သင့်အဖော်ကို ဘယ်လိုအနေအထားက စိတ်ကျေနပ်မှု ဖြစ်စေသလည်း စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး သူကျေနပ်အောင်လည်း ပြုမူပေးပါ
သငျ့အနနေဲ့ သငျပွုမူခငျြသလို ပွုမူနတောမြိုး မလုပျပဲ ၊ သငျ့အဖျောကို ဘယျလိုအနအေထားက စိတျကနြေပျမှု ဖွဈစသေလညျး စုံစမျးမေးမွနျးပွီး သူကနြေပျအောငျလညျး ပွုမူပေးပါ
စိတ်အေးလက်အေး အနားယူလို့ရမယ့် နေရာမျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သပ်ရပ်သန့်ရှင်းတဲ့ အိပ်ယာမျိုး ဖန်တီးထားနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ် ။ တိုးညှင်းတဲ့ ဂီတသံမျိုးဟာလည်း သင့်အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ
စိတျအေးလကျအေး အနားယူလို့ရမယျ့ နရောမြိုး ဖွဈသငျ့ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ သပျရပျသနျ့ရှငျးတဲ့ အိပျယာမြိုး ဖနျတီးထားနိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ ။ တိုးညှငျးတဲ့ ဂီတသံမြိုးဟာလညျး သငျ့အတှကျ အထောကျအကူ ဖွဈစမှောပါ